Tetezana Farahantsana : Nitombo indray ny fotodrafitrasa vita -
AccueilRaharaham-pirenenaTetezana Farahantsana : Nitombo indray ny fotodrafitrasa vita
17/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Azo antoka ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimeran-doholona, Rivo Rakotovao, omaly, mantsy ny tetezana vaovao tao Farahantsana-Mahitsy. Notanterahina ny fanamboarana sy famitana ity tetezana ity mba ho an’ny mponina ao amin’ireo kaominina ambanivohitr’Ambohimasina sy Ampanotokana, ary indrindra ahafahan’izy ireo misantatra sahady ny fampandrosoana ho an’ny rehetra. Tsy izay ihany fa ho fanokafana ny toekarena amin’ireo kaominina ireo sy ny manodidina azy.
Nambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fitokanana fa “manamarika ny firaisam-pirenena ity tetezana vaovao ity. Manambara ihany koa ny fahalasanan’ny fahantrana mankany amin’ny ho avy feno fanantenana amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay hoentin’ny Fitondrana sy ny ireo mpiara-miombon’antoka sy mpiara-miasa tsy miankina”.
Noho ny favahitan’ity tetezan’i Farahantsana ity, izay efa niasa sy nampiasaina nanomboka ny faran’ny volana oktobra teo, nahafahana ihany koa nanomboka ny asa mahakasika ny foibe mpamokatra herinaratra ao Mahitsy.
Araka izany, natomboka tamin’ny fomba ôfisialy omaly ihany koa ny asa fanamboarana ity foibe famokarana herinaratra ao Mahitsy ity. Voalaza fa manampy betsaka amin’ny fanatanterahana ny politika vaovao eo amin’ny tontolon’ny angovo azo havaozina ny fametrahana sy fananganana ity ivon-toerana famokarana herinaratra ao Mahitsy ity.
Marihina fa mamokatra 22 MW ity foibe mpamokatra ity, ary afaka mamatsy tokantrano manodidina ny 200 000 eo ho eo hatramin’ny taona 2020. Ity tetikasa ity dia mampirisika ny fampihenana ny famokarana herinaratra eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fanamafisana ny hadirin’ny famokarana eo anivon’ny tambazotra iraisan’Antananarivo.
Ankoatra izay, ny fanatanterahana ity fotodrafitra fototra ity dia akon’ny fitsidihana nataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana tany Italia. Noho izay indrindra, dia vatsian’ny Banky ho amin’ny Fampandrosoana eo anivon’ny governemanta italianina izay miaraka amin’ny vondrona Tozzi Green eto Madagasikara. Marihina fa mamokatra asa 300 ho an’ny mponina ao Mahitsy ity tetikasa goavana ity.
Araka izany, dia tsy mijanona hatreo akory ny asa fampandrosoana ataon’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, fa mihitatra amina faritra maro manerana ny Nosy.